1. 'Bitcoin', imali yedijithali yehlabathi elitsha Luhlobo luni lotyalo-mali oluya kufumana eyona nzuzo! Ukuba kumashumi eminyaka eyadlulayo Umntu othile ukuxelela ukuba kuya kubakho imali ezimeleyo kuyo nayiphi na iarhente yaseburhulumenteni. Kodwa iya kuduma ekusetyenzisweni lonke Yeyiphi imali yokuhlawula esezantsi kunaleyo yentlawulo zebhanki Uya kuhleka uze ungakholelwa. Kodwa namhlanje kubonakala ukuba unako ukuthenga nantoni na. Kuyamangalisa ngokumangalisayo ngohlobo lwemali eyaziwa ngokuba yi 'Bitcoin'. Yintoni i-Bitcoin? I-Bitcoin yimali yedijithali. Yenziwe ngeekhompyuter. Yeyiphi imali engaphathekiyo Akukho bume bokubona ngathi yibhanki okanye ingqekembe. Yinkqubo engekho embindini. Akukho mntu ungumnini. Kodwa inokusetyenziselwa endaweni yemali ukuthenga nge-Intanethi ngenkqubo yokuhlawula oontanga. Kwaye wabiza le mali "I-Cryptocurrency"
2. Ukuze ube nemali, kufuneka ube nesipaji, leyo yimali Ukuba ufuna ukuba nemali, kuyakufuneka ufumane isipaji esihle, esiya kuba nomsebenzi ofana neakhawunti yebhanki. Sigcina i-bitcoins ngaphambi kokuba siyisebenzise. Zininzi iiplatifti ezahlukeneyo zeewallets - Isipaji seCoinbase sisipaji ekulula ukusisebenzisa kwiscreen se-smartphone. Iya kuxhasa zombini i-iOS kunye neAndroind ngokubopha iakhawunti yebhanki. Ngaphezulu, inkonzo yokutshintshiselana nge-bitcoin iphuma njengemali yokwenyani kwaye inikezela nge-inshurensi yemali- iMycelium sesona sicelo sithandwayo sithandwayo kwii-smartphones. Inokuxhasa ubuchwephesha obutsha obufana neTrezor, iTor kunye neBitcoin yokugcina izixhobo zeekhompyuter- -Electrum Le wallet yinkqubo esetyenziswa kwikhompyuter. Iza nenkqubo ebalaseleyo yokubhala ngokufihlakeleyo. Ukugcina ii-bitcoins ezininzi kakuhle
3. Uyifumana njani iBitcoin
4. Ucingo ngaphandle kwabaqalayo Akukho mali eninzi, ekwaziyo ukufumana i-Bitcoin yasimahla kwiwebhusayithi ethembekileyo yokunikezela Ekufuneka ihlolwe ngononophelo Ngenxa yokuba uninzi lwazo luya kukhohlisana Iwebhu ehanjiswa ngokwenene yile https://freebitco.in Yintoni enokungena kwaye isebenzise kwaye ufumane idilesi yethu ye-bitcoin kuyo nayiphi na iwebhusayithi kwiZipmex.co.th, Bitkub.com, Satang.pro okanye eHuobi.co.th ukugcwalisa nokugcina i-bitcoin rhoqo ngeyure nganye, ukufikelela kwinqanaba elincinci. nini Ungadlulisela kwisipaji sethu
5. Ukuthengisa imigca, apho siza kuthenga khona i-bitcoin kwi-baht, siyenza eThailand, iwebhusayithi yabo, iZipmex.co.th, iBitkub.com, iSatang.pro okanye iHuobi.co.th iyakusivumela ukuba senze isicelo sokuqinisekiswa kwesazisi, sithumele i-baht Iakhawunti kwaye uthenge i-bitcoin kumrhwebi ukuba abe ngowethu. Kuxhomekeka ekubeni ukhetha ukubamba imali iminyaka eliqela, okanye ungathengisa iBitcoin kwaye urhwebe nge-baht ngokunjalo, kodwa kukwakhona umngcipheko. Ngenxa yokuba imakethi ye-crypto ivulekile ngalo lonke ixesha.
6. Eyona nto iyingqayizivele kunye neyonwabisayo yeBitcoin kukuba inokumbiwa njengegolide kwifom yedijithali. Ngenxa yokuba yenzelwe ukuba nezigidi ezingama-21, akunakubakho ngaphezulu. Ke kufuneka sisebenzise ubuchule bemigodi. Kukumba ngesixhobo sehardware Yeyiphi le excavator enokuthengwa kwi-Intanethi Misela nje, uyifake, uhlawule ityala lakho kwaye ulishiye. Iya kugcina isimba imali yedijithali kuthi.
7. Indlela nganye yokutyala imali kwi-Bitcoin yahlukile. Ngaba ngekhe ukwazi ukugweba ukuba yeyiphi eyona ilungileyo Kodwa kubalulekile ukuba uhlale ufunda iinkcukacha kunye neendlela zohambo lwemali. Ukuze uncede ikhontrakthi yenzuzo ngokuchanekileyo ixesha elimiselweyo. Kwaye ufumane ezona ziphumo zibalaseleyo